Degmadda Götene waxeey ku taala Västra Götaland barbarka xeebta Vänerns qeeybtiisa bari-koonfureed, waxeeyn degmada ka kooban thay xaafadaha Götene, Hällekis, Källeby iyo Lundsbrunn. Buurka Kinnekulle ayaa ah degmada qiimaheeda, sido kale waxaa loo yaqaan buurka ubaxa. Degmada Götene waxaa ku taalo ku dhawaad 1 400 shirkad iyo 180 ururo oo shaqeeyo.
Degmada waxeey ku jirtaa liiska UNESCO ee goobta-jawi nololeedka Vänerskärsgården oo leh Kinneskulle. Götene waa degmad shirkadeed oo leh ku dhawaad 1 400 shirkad iyo goobo shaqo oo weeyn.
Waxaa ka mid ah luuqadaha looga hadlo Götene af carabi, af dari, af faarsi, af karen, af bashto, afka iraan, af soomaali iyo afka isbaaniya.
Degmada Götene waxaa ku taalo ku dhawaad 190 ururo oo shaqeeyo. Waxaa jiro ururo dhaqan, kooxax doomeed, kooxax isboorti, ururada howlgabka, dhaqdhaqaaqa wax sahamiya, ururo curyaanka, ururo siyaasad iyo kuwo kale.
Bartamaha Götene waxaa ku yaalo xafiiska dad weeynaha, maktabad, xafiiska bulshada, farmashiye, shaleemo, goob-dabaal, kaniisado, goob banooni oo leh coowska warshadeeysan, goob jimicsi, kafeteeriyo iyo maqaayado. Gudaha bartamaha Götene waxaa badankood waxaa laga gadan karaa dukaamankeena. Waxaa jiro dukaan-gacan labaad oo hayo alaab guri, dhar iyo maacuun. Waxaa la balansan karaa Xafiiska qasnada ceeymiska, ayaga ayaa ka dib imaanaayo Götene, xafiiska waxuu ku yaalaa Lidköping. Ayado kombiyuutarka la adeegsanaayo ayaa lala hadli karaa Xafiiska shaqada, xafiiska waxuu ku yaala Skara. Degmada waxeey lee dahay Xafiiska suuqa shaqada oo siiyo tageero dheeraad ah qofka shaqo la’anta, hadna leh qaabilaad-qaxooti.
Caawinaad turjumaan luuqad kasto ayaa lagu heli karaa. Warbixin ku saabsan xafiiska-turjumaanka.
Modersmålslärare i finska Modersmålslärare/Modersmålspedagog
Driftschef Produktion Byggisolering Paroc Hällekis Produktionschef, tillverkning
Lärare i förskoleklass på Ljungsbackenskola Lärare i förskoleklass
Development Engineer Konstruktör, tillverkningsindustri
Källby förskola söker förskollärare Lärare i förskola/Förskollärare
Socialsekreterare till familjeenheten Socialsekreterare
Källby Gård söker lärare F - 3 Lärare i grundskolan, årskurs 1-3
Produktionstekniker Civilingenjör, konstruktion, maskin
Restaurangbiträden till Kinnekullegården Restaurangbiträde
Ansvarstagande hovmästare sökes till Kinnekullegården Hovmästare
Källby förskola söker barnskötare Barnskötare
Mark - och exploateringsansvarig Exploateringsingenjör
Är du den vi behöver? Personlig assistent
Söker en toppen assistent till 23 årig kille i Götene Personlig assistent
Är du den vi söker? Personlig assistent ca 60% Personlig assistent
Personal med maskinvana och truckkort sökes Maskinoperatör, mekanisk verkstad
Bogga 1 ee ka mid ah 10